Photoshop CS2 သင်ခန်းစာ CD လေးလိုချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
Photoshop CS2 သင်ခန်းစာ CD လေးလိုချင်လို့
Vote Up0Vote Down kothaung December 2008 Posts: 0Registered Users အကိုတို့ အမတို့ရေ။ကျေးဇူးပြုပြီး ဖိုတိုရှော့ cs2 သင်ခန်းစာခွေလေးလိုချင်လို့ပါ။cd ခွေထဲက ပြောပြထားတာလေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ရအောင်ပါ။တကယ်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်ကို ရှဲ ပေးကြပါလို့။	9 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down Alexander December 2008 Posts: 1,983Administrators Bro က ရန်ကုန်ကလား???ရန်ကုန်မှာဆို Computer CD ဆိုင်တွေမှာ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာလိုသင်ပေးတဲ့ CD တွေတောင်ရှိပါတယ်။CS, CS2 အကုန်၀ယ်လို့ရတယ် .... "Active" မှာဆို English လို သင်ပေးတဲ့ CD တွေ အများကြီးပဲ။ :)စျေးလဲ မကြီးပါဘူး။ Download လုပ်တာကမှ Cyber Cafe' ကနေဆို ပိုပြီး အကုန်အကျ များနေဦးမယ်။ :)Alexander လဲ သောကြာ .. စနေ .. တနင်္ဂနွေ ( 6,7,8/12/08 ) ...... ၃ရက် Yangon ပြန်လာမှာ ... CD တွေ တပုံကြီး၀ယ်ပြီး မော်ကျွန်းပြန်မှာ .... :D\_:D/	Vote Up0Vote Down computer__crazy December 2008 Posts: 264Registered Users Photoshop Top Secret ဆိုတဲ့ ဒီဗီဒီ စီးရီး ၀ယ်လိုက်ဗျငါးချပ်လား ခြောက်ချပ်လားမသိဘူး ရှိတယ်.. တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်..Rapidshare ကနေတော့ ဆွဲလို့ရတယ်.. အကောင်းဆုံးက စီဒီဆိုင်မှာ၀ယ်ပေါ့..သက်သာတယ်လေ..:Dစီခရေဇီ	Vote Up0Vote Down snapshot January 2009 Posts: 10Registered Users လို ချင်ရင်တော့ PDF နဲ့ ပြောင်း ထား CS_2 စာအုပ် တော့ ရှိတယ်လို ချင်ရင် share ပေးမယ် ။	Vote Up0Vote Down buffoon January 2009 Posts: 0Registered Users [quote=snapshot;26164]လို ချင်ရင်တော့ PDF နဲ့ ပြောင်း ထား CS_2 စာအုပ် တော့ ရှိတယ်လို ချင်ရင် share ပေးမယ် ။ ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးပြုပြီးshare ပေးပါလား...	Vote Up0Vote Down oasis January 2009 Posts: 39Registered Users ပြောနေရသေးတယ် snapshot ရယ် ... share ချင်တာများ အရင်ဆုံးတင်ထားပေးလိုက်ပေါ့ ... အဲဒါဆို ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော် ... စိတ်ဆိုးနဲ့နော် .. သားလည်း လိုချင်လို့ .... :):68:	Vote Up0Vote Down EveningPrimrose January 2009 Posts: 110Registered Users Photoshop က CS4 တောင်ထွက်နေပြီ။ ဘာလို့ ခုမှ CS2 လေ့လာမှာလဲ။ CS4 Classroom In Book ၀ယ်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါလား Active မှာရနေပြီ။	Vote Up0Vote Down snapshot January 2009 Posts: 10Registered Users EveningPrimrose said:Photoshop က CS4 တောင်ထွက်နေပြီ။ ဘာလို့ ခုမှ CS2 လေ့လာမှာလဲ။ CS4 Classroom In Book ၀ယ်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါလား Active မှာရနေပြီ။Adobe Photoshop CS4 - Adobe Photoshop CS4 User Guidehttp&#58;//rapidshare.com/files/175307950/Adobe_Photoshop_CS4_User_Guide-Upped-by-Quarantine.zip	Vote Up0Vote Down snapshot January 2009 Posts: 10Registered Users Adobe Photoshop CS2 One-Click Wow! (2nd Edition) (One-Click Wow) ISBN-10 / ASIN: 0321246446 ISBN-13 / EAN: 9780321246448 Publisher: Peachpit Press Number Of Pages: 120 Publication Date: 2005-11-21 If you're interested in taking advantage of the powerful new layer capabilities in Photoshop CS--including support for nested layers (up to five levels deep!),aLayer Comp feature that lets you store multiple designs withinasingle document, and the ability to work with layers in 16-bit images--you've come to the right place! This powerful book/CD combo is chock-full of one-click makeovers guaranteed to transform images instantly and easily, helping you employ layers effectively and creatively in the process. Better than filters--not to mention cheaper, more efficient, and easier to use--the CD's myriad Layer Styles transform photos into paintings, and type and graphics into metal, gems, glass, and just about anything you can conceive. In the book itself, veteran author Jack Davis� shows you how to work with Photoshop's powerful Layer Styles (including an easy, five-page step-by-step tutorial) and providesagallery of full-color examples of the included Wow! Layer Styles and effects. http&#58;//ifile.it/yzs9d8 http&#58;//ifile.it/h38vob	Vote Up0Vote Down oakka February 2010 Posts: 1Registered Users Thank you pe' byoo....Kya naw lel ko' phar tar ko self study lote chin nay ter kyar p..thanks for sharing :)snapshot said:Adobe Photoshop CS4 - Adobe Photoshop CS4 User Guidehttp&#58;//rapidshare.com/files/175307950/Adobe_Photoshop_CS4_User_Guide-Upped-by-Quarantine.zip	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
December 2008 buffoon
January 2009 computer__crazy
December 2008 EveningPrimrose
January 2009 oakka
February 2010 oasis
January 2009 snapshot